Ku guuleysiga horyaalka Premier League oo khasaaro u horseeday Kooxda Liverpool iyo Arsenal oo Gawska dambe ka qosleysa! – Gool FM
(Liverpool) 27 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markii ugu horreysey ku guuleysatay horyaalka Premier League, iyagoo soddon sano kaddibna noqday ku guuleystayaasha horyaalka Ingiriiska.
Waa guul taariikhi ah oo ay Reds usoo hoyeen wiilasha uu hoggaamiyo Macallin Jurgen Klopp, iyagoo rumeeyay riyada malaayiin taageerayaal ah oo u sacab tuma kooxda ku ciyaarta Anfield Road.
Balse waxaa guushaas barbar socda inay Liverpool wajaheyso dhaqaalo bixin ballaaran iyadoo qasnaddooda ay ka bixi doonto lacag ka badan 10 milyan oo gini oo ay siin doonaan qaar ka mid ah xiddigahooda iyo kooxo ka dhisan dalka Ingiriiska.
Iyadoo ay jirto in lacag dhan 4 milyan oo gini loo qaybin doono safka kooxda sida ay sheegtay Sportsmail bishii Febraayo ee sanadkan, haddana waxaa jira xiddigo heshiiskooda ku qaadanaya gunnooyin ay kula heshiiyaan kooxda hanatay horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa sidoo kale gunnooyin ku xusnaa heshiisyo kala iibsi ah siin doona kooxo ay ka mid yihiin Arsenal, Southampton and Charlton.
Gunnooyinka ay ciyaartoyda Reds ku qaadanayaan heshiiskii ay wada galeen hore ayaa ka qaalisan gunnooyinka ay kooxda u wada garatay dhammaan xiddigaha kooxda, iyadoo xiddig walba uu abaalmarin ahaan u helayo 150,000 oo gini, xilli saxiixyadii ugu dambeeyay ee kooxdan soo gaaray ay heli doonaan lacag u dhexeysa 500,000 illaa 750,000 oo gini.
Xiddigaha kala ah Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson, Naby Keita iyo Alex Oxlade-Chamberlain ayaa jeebka ku ridanaya lacag kaash ah kaddib markii ay mushaharaad badan ku imaadeen Liverpool oo yididdiilo guuleed ka muuqato.
Inay si joogto ah ugu soo baxdo tartanka Champions League iyo inay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska ayaa kooxaha qaar waxay kaga dalbanaayaan gunnooyin ku xusnaa heshiisyo ay Liverpool kula soo saxiixatay xiddigo dhowr ah.
Naadiga Southampton ayaa heli doonta faa’idada ugu badan ee dhaqaale, iyagoo qasnaddooda ku xareysan doona lacag dhan 3 milyan oo gini, isla markaasna ku xusnaa heshiisyadaa Van Dijk, Sadio Mane, Adam Lallana iyo Dejan Lovren ugu dhaqaaqeen Anfield.
Arsenal ayaa iyaduna dhankeeda heli doonta lacagaha ka baxaya koontada Liverpool, kaddib iibkii Oxlade-Chamberlain ee xagaagii 2017.
Kooxaha Championship-ka ciyaara ee kala ah Hull City iyo Charlton ayaa usoo feyli doona lacagaha gunnooyinka ah ee ay ku helayaan saxiixyadii Andrew Robertson iyo Joe Gomez, maadaama heshiiskooda uu ku jiray inay Liverpool bixiso gunnooyin haddii xigahan ay kula guuleystaan horyaalka Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, gunnooyinkan ay helayaan kooxaha iyo ciyaartoyda aan soo sheegnay ayaa ku jiray heshiisyadii xiddigaha iyo kooxihii laga soo iibsaday ay la galeen Reds.